Shir u dhaxeeya Soomaaliya iyo Beesha Caalamka oo looga wadahadlayo taageeridda Istiraatiijiyadda Qaranka – Walaal24 Newss
February 17, 2019	0	By walaal24
Wasiirka Warfaafinta Dhaqanka & Dalxiiska Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa si rasmi ah u furay shirka heerka sare ee deeq-bixiyeyaasha ee taageeridda Istiraatiijiyadda Wacyi-gelinta Qaranka.
Shirkaan ayaa waxaa goob joog ka ah masuuliyiin ay kamid yihiin Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Soomaaliya, Wasiirka Arrimaha Dastuurka, Xubno ka socda maamulka gobolka Banaadir iyo masuuliyiin matalayey Beesha caalamka oo ay kamid yihiin Safiiro iyo Wakiilo kale.
Shirka ayaa inta uu socdo diiradda lagu saarayaa Taageeridda Wacyi-gelinta Qaranka oo ay hormuud u tahay Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya.
Dhamaadka shirkaan waxa lagu soo bandhigi doonaa wixii la isla meel dhigay ee ku aadan istaraatiijiyadda wacyigelinta qaranka hanaanka deeqbixiyaasha iyada oo xubnaha metelaya maamulada Goboleedyada, isla markaana ay deegaanadooda dib ugu celin doonaan hanaanka si looga hirgelinayo.
Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Dalka Kenya oo laga soo ceyriyay ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo gaaray Magaalada Kismaayo
Diyaaradaha aan duuliyaha wadin oo lagu weeraray dhulka saliidda laga soo saaro oo ku yaalla magaalada Riyadh
Dowladda Mareykanka oo u digay Dowladda Iraan una diray Markab dagaal